Iindaba - iChlorothalonil
I-Chlorothalonil kunye ne-fungicide ekhuselayo
I-Chlorothalonil kunye ne-Mancozeb zombini zizibulala-ntsholongwane zokungunda eziye zaphuma ngeminyaka yoo-1960 kwaye zaxelwa okokuqala ngu-TURNER NJ ekuqaleni koo-1960. I-Chlorothalonil yafakwa kwimarike ngo-1963 yi-Diamond Alkali Co. (kamva yathengiswa kwi-ISK Biosciences Corp. yase-Japan) yaze yathengiswa kwi-Zeneca Agrochemicals (ngoku eyi-Syngenta) ngo-1997. enokuthi isetyenziswe kuthintelo kunye nonyango lwezifo ze-lawn foliar. Amalungiselelo e-chlorothalonil abhaliswa okokuqala eMelika ngo-1966 kwaye asetyenziselwa ingca. Kwiminyaka embalwa kamva, yafumana ukubhaliswa kweyeza lokungunda eUnited States. Yayisisichiza sokungunda esivunyiweyo sezityalo zokutya eMelika. Ngomhla wama-24 kuDisemba, i-1980, imveliso yogxininiso ephuculweyo (i-Daconil 2787 Flowable Fungicide) yabhaliswa. Ngo-2002, imveliso yengca ebibhalisiwe ngaphambili i-Daconil 2787 W-75 TurfCare yaphelelwa eCanada, kodwa imveliso yogxininiso yokunqunyanyiswa isasetyenziswa unanamhla. NgoJulayi 19, 2006, enye imveliso ye-chlorothalonil, i-Daconil Ultrex, yabhaliswa okokuqala.
Iimarike ezintlanu eziphezulu zeklorothalonil zise-United States, France, China, Brazil, and Japan. I-United States yeyona marike inkulu. Izityalo ezisetyenziswa kakhulu ziziqhamo, imifuno kunye neenkozo, iitapile, kunye nezicelo ezingezizo izityalo. Iisiriyeli zaseYurophu kunye neetapile zezona zivuno ziphambili ze-chlorothalonil.
Umchiza wokungunda okhuselayo ubhekisa ekutshizeni kumphezulu wesityalo phambi kokuba isifo sesityalo senzeke ukuthintela uhlaselo lweentsholongwane ezibangela izifo, ukuze isityalo sikhuseleke. Ezo zikhuseli zokungunda ziphuhliswe kwangethuba kwaye zisetyenziswe elona xesha lide.
I-Chlorothalonil sisibulala-zinambuzane esibanzi esineziza ezikhuselayo ezinentshukumo ezininzi. Isetyenziselwa kakhulu ukutshiza ngamahlamvu ukunqanda kunye nokulawula izifo ezahlukeneyo zezityalo ezahlukeneyo ezifana nemifuno, imithi yeziqhamo kunye nengqolowa, ezifana ne-spore blight, i-downy mildew, i-downy mildew, i-Powdery mildew, i-leaf spot, njl njl. Isebenza ngokunqanda ukuntshula kwembewu. kunye nentshukumo yezoospore.
Ukongeza, i-chlorothalonil iphinda isetyenziswe njengesigcini somthi kunye nesongezo sepeyinti (i-anti-corrosion).